Ukuzalwa kwengane kuyinjabulo enhle nomthwalo omkhulu. Izingxabano mayelana nokukhuliswa kwezingane nokunakekelwa kwezingane ziye zenziwa kusukela esikhathini esidlule. Othisha abanolwazi nabahlengikazi bayavuma ukuthi kulula ukuvikela isingeniso sendlela yokukhula nokufundisa, kunokuba ikhule ingane eyodwa. Noma kunjalo, yini ebaluleke kakhulu ekukhulisweni kwezingane? Sizozama ukuqoqa amathiphu abalulekile kakhulu namathiphu ekukhulisa ingane kusihloko esisodwa.
Ukukhula noma ukukhulisa ingane?
Akubona bonke abazali abaqaphela ngokugcwele umthwalo wemfanelo abazithatha wona, sebequmile ukuba nabantwana. Iningi lemikhaya elisha lithola kunzima kakhulu ukuhlinzeka izingane ngokunakekelwa ngokwezinto ezibonakalayo naseminyakeni yokuqala yokuphila. Kodwa empeleni, lokhu kuyiphutha elikhulu. Izindima zomama nabazali kufanele zigcwaliseke kulo lonke ukuphila. Ngesikhathi esifanayo, ingane idinga ukunakekelwa nokunakekelwa okukhulu komndeni okungenani kuze kube sekupheleni kwesikole. Wonke umzali oqaphelayo ufisa ngobuqotho ingane yakhe kuphela. Kodwa khumbula ukuthi kubalulekile ukukhulisa ingane, hhayi ukuqondiswa izifiso namaphupho kuphela. Kuwusizo ukukhumbula kusukela ngesikhathi sokuzalwa komntwana ukuthi ungumuntu, futhi emva kweminyaka kuyoba umuntu omdala okhulile. Umsebenzi wabazali ukusiza ingane yabo ukuba ikhule enempilo futhi ehlukahlukene, futhi ingayikhulumi indodana noma indodakazi "umntwana omuhle." Ukubeletha kuyindlela yansuku zonke. Khumbula ukuthi emntwaneni abazali bakhe bangabantu abaluleke kakhulu empilweni yakhe. Kungakhathaliseki ukuthi usebenza kanjani, nikeza usuku ngalunye isikhathi ingane. Uma ukhathele - vele uxoxe noma udlale. Ungamnaki ingane futhi ungashintshi ukukhuliswa kwakhe kwabangaphandle!
I-microclimate yengqondo emndenini
Ukusebenzisa imfundo efanele yengane, kubalulekile ukudala isisekelo esihle. Iminyaka yokuqala yokuphila izwe lomntwana ngumndeni wakhe. Ukubuka usuku nosuku, indlela abantu abadala abaziphatha ngayo, indlela abahlobana ngayo, ingane ihlobisa umbono wayo jikelele. Ngesikhathi esifanayo, ngenxa yokungabi nalutho lokuphila, ingane ayikwazi ukuhlola izenzo ezenzelwe abazali. Konke abakwenzayo kubonakala sengathi kunembile noma okungenani evamile. Khumbula: ngaphansi kwanoma yiziphi izimo ungafunga futhi uthole ubuhlobo nengane! Kuyinto efiselekayo ukuthi ingane ngokuyisisekelo ayihlangabezane nemizwelo emibi nababi bayo. Kunzima kakhulu ukugcwalisa lesi simo, kodwa zama ukungafihli ingane. Uma ukhathele kakhulu, ucasukile, noma ubuhlungu - ngitshele ngobuqotho ukuthi kwenzekeni endodaneni yakho noma indodakazi yakho. Ngikholelwa, ngisho nangeneminyaka engu-3-4, ingane iyokuqonda. Ngaphandle kokuchazwa kwesimo sengqondo esibi sabazali, ingane ingase icabange ukuthi isizathu sayo, futhi lokhu kuyingozi kakhulu yokuziphatha. Ukuxhumana kwansuku zonke, amasiko omndeni namaholide - yilokho okudingekayo kithi ngamunye, kanye nezingane ezingeni elikhulu kakhulu. Emndenini othulile, omuhle, kunamathuba amaningi okukhula kwengane ejabule futhi enempilo. Zama ukuvikela ingane emsindweni olwazini oluningi nolwazi olubi. Ngisho nomculo osheshayo futhi onomdlandla kufanelekile kuphela emidlalweni yangaphandle nemisebenzi yezemidlalo. Akuvumelekile neze ukubukela izinhlelo "zabantu abadala", ama-movie aphikisanayo namanye amavidiyo angalimaza i-psyche ebuthakathaka.
Isimo esihle sokuthuthukiswa
Izingane zasenkulisa ziyazi okuningi ngezwe njengoba abazali bakhe benesikhathi sokumtshela. Eminyakeni yokuqala yokuphila umhlaba wezingane yikamelo lakhe kanye nefulethi. Zama ukuhlomisa isikhala lapho umntwana ehlala khona. Thenga amathoyizi nezinto zokwakha, ezifanelekayo ezincane. Umbuso ofanele wokukhetha izinto zezingane ukulalela izinga labo kanye nokuhluka, hhayi ubuningi. Ngikholelwa ukuthi, amathoyizi amathathu ahlukene azoba usizo kakhulu futhi anentshisekelo kunezingane ezifanayo kakhulu. Igumbi lomntwana noma ikhoneni lezingane kufanele "likhule" nomphathi walo. Shintsha ifenisha uma kunesidingo, ngezikhathi ezithile ubuyekeze umtapo wezingane kanye namathoyizi. Qinisekisa ukuqapha ukuphepha endlini, gcina izinto ezingase zibe yingozi ezingena ekufinyeleleni kwengane.
Ukudla nokuthuthukiswa ngokomzimba
Ukukhulisa ingane akugcini nje ukumkhuphula. Okubaluleke kakhulu ukunakekela ingane nokugcina impilo yakhe. Eminyakeni yokuqala yokuphila, izinqubo zokuhlanzeka zenziwa ngokugcwele ngabazali. Kodwa uma uneminyaka engama-4 umntwana kufanele akwazi ukwenza izinto eziningi ngokwakhe: geza, ugeze izandla, vysmarkovatsya. Kancane kancane, ingane ifunda ukuzikhathalela ngokuphelele, abazali bayobacabangela ngezikhathi ezithile mayelana nokuqaliswa kwezinyathelo ezithile. Ukunakwa kufanelekela ukudla komntwana. Ngemuva kokuguqulwa okugcwele ekudleni "abadala" kumele kuhlelwe ukudla okuyisihlanu ngosuku, lapho ukudla okuyisithathu kuzoba yisisekelo, nokudla okubili. Zama ukondla ingane ngezindlela ezihlukahlukene, ukhethe okuthandayo ukudla nokudla. Kubalulekile ukukhokha ngokwanele ukuthuthukiswa komzimba kwengane. Ukuzivocavoca nsuku zonke, ukudlala imidlalo yeselula futhi uhambe esimweni esihle sezulu. Uma uqaphela ukuthi ingane ihlinzekela ngokukhethekile uhlobo oluthile lomsebenzi womzimba, cabanga ngokuyinikeza esigabeni esifanele sezemidlalo.
Into eyinhloko ukunakekelwa nothando
Ukuze sikhulume ilungu elifanele lomphakathi futhi nje umuntu omuhle, akudingekile ukuba yingqondo yengqondo yengane. Into eyinhloko ukuthanda ingane yakho futhi unganqikazi ukumbonisa yona nsuku zonke. Hamba ingane ngesikhathi ngasinye, khuthaza impumelelo yakhe nempumelelo yakhe. Phatha ingane ngenhlonipho, njalo ulalele ngokucophelela izindaba zakhe kanye nezicelo. Khumbula ukuthi ubuhlobo nendodana noma indodakazi kumele kwakhiwe kusukela ebuntwaneni. Ubuhlobo "umzali-ingane" kuyasiza ukufaka esikhundleni sokuxhumana ngokulingana okulinganayo. Yiqiniso, sikhuluma ngokuxhumana kwansuku zonke okuhle. Ukudlala nengane nsuku zonke, ukuqhuba izikhathi zokuqeqesha naye ngefomu lezemidlalo, uyakha isisekelo esiqinile sokwethemba impilo. Akudingekile ukukhulisa ingane ngendlela yokwenqabela, ukujeziswa nokuziphatha njalo. Uma kunokwenzeka, khuluma nomntwana ngokulingana okulinganayo, uchaza konke "okungenzeka" futhi "hhayi". Ngikholelwa ukuthi leli qhinga alisebenziseki kangcono kunesiyalo esinzima kakhulu. Zama ukuvumela umntwana ukuba azizwe avikelwe. Kuyini umndeni? "Abazali + ingane" yiyona ndlela engcono kakhulu, bonke abahlanganyeli okufanele bahlanganyele empilweni yomunye nomunye futhi baxazulule zonke izinkinga eziphakama ndawonye.
Isihloko sokuthuthukiswa kokuqala sithandwa kakhulu kubazali banamuhla. Indlela yokufundisa ingane ekhaya, yini okufanele afunde ngaphambi kokuya esikoleni? Ungaguquli ngokuphelele umsebenzi wezemfundo enkulisa yezinkulisa noma ezentuthuko. Ngendlela yokwenza izifundo nezifundo ezenzakalelayo, ingane ayifunde okuningi lokho abazali abangamtshela ngesikhathi ingxoxo evamile. Zama ukukhuluma ngangokunokwenzeka nengane mayelana nakho konke okusezweni kusukela esemncane. Ukulalela imibuzo ebuzwe yizingane, umuntu angafunda okuningi mayelana nezithakazelo zabo. Umsebenzi wabazali ukusekela ingane ngangokunokwenzeka emisebenzini ethakazelisayo nasemkhakheni wolwazi. Ubani owaziyo, mhlawumbe kusuka kumthandi wemoto omncane, umklami omkhulu ngempela ozokhula ngempela, futhi umfana wezilwane ezincane ezinhle uzokuba ngudokotela wezilwane ovelele. Thatha isikhathi sokuba wazi izinyane lezinhlobo ezahlukene zobuciko. Ukudweba, ukudweba, ukubukwa kwezemidlalo kanye nomculo wezingane kufanele kukhethwe ngokusho kweminyaka yobudala kanye nomuntu siqu.
Ngokuvamile, ngesimo sengqondo esikhethekile emndenini, izingane eziphuthumayo zibhekene nazo. Inkinga evamile kakhulu ukunakekelwa ngokweqile. Emindenini eminingi, ukuzalwa kwezinsana emva kweminyaka engamashumi amathathu kuyisenzakalo esibi futhi esihleliwe. Abazali abavuthiwe banesibopho sempilo yabo futhi bazama ukuzivikela kuzo zonke izingozi ezingenzeka ezinganeni zabo. Omama nobaba abanjalo kufanele bazame ukuzola. Okusemqoka kokunakekelwa kwezingane kufanele kubandakanye ukujwayela kwengane nemithetho yokuphepha. Kodwa khumbula, ingane yakho ayiyona i- crystal vase. Futhi uma yonke imisho yakho yesithathu etshela ingane kuyisixwayiso noma kuvinjelwe, sekuyisikhathi sokulungisa ukuziphatha kwakho. Abazali abavuthiwe kufanele bafunde ukuxhumana nezingane zabo siqu ngokulingana, ngokuphindaphindiwe nangaphezulu ukuze badlale nayo, kunokuba babonise ukuthi yini nokuthi kanjani kufanele. Kubonakala sengathi zonke lezi zinkinga akufanele zibe, lapho abantwana bephuzile bezalwa emindenini emikhulu. Kodwa kulokhu, akuzona zonke izinto ezilula, ngoba abantu abasha bavame ukuba izilwane ezifuywayo emndenini. Futhi zikhula ziphazamiseke, zizizwa ziphakeme. Uma kunabantwana abaningana, abazali kufanele bazame ukusabalalisa ukunakwa kwabo bonke abantu. Kubalulekile ukufundisa izingane othandweni kanye nokuphendula.
Kunzima ukukholelwa, kodwa emashumini eminyaka edlule imindeni enezingane eyodwa ibhekwa njengengavamile. Namuhla abazali abaningi abacabangi ngisho nokuzalwa kwezingane, emva kokuzalwa kwengane yokuqala. Kubalulekile kanjani ukuhlela ukukhulelwa uma unomntwana munye emndenini? Ngokuvamile ingane eyodwa kuphela ikhuliswa ngendlela efanayo nezingane eziphuzile. Amaphutha wabazali abavamile: ukuxhunywa komzimba nokulindela ngokweqile. Izingane zezengqondo zithi izingane ezikuphela emndenini zivame ukuba nezinkinga ebuhlotsheni babo nabangane babo. Ukuvimbela ubunzima kulesi sigaba, kufanele udale izimo zansuku zonke zengane ukudlala nabangane. Hamba endaweni efanayo yokudlala lapho ingane yakho ingenza abangane noma uyilobe phansi izifundo zokuthuthukiswa. Ngokuvamile, uma ingane eyodwa izalwa emndenini, abazali banquma ukungayinikeli enkulisa. Kodwa khumbula, ungakwenza lokhu kuphela uma umntwana enabangani abanele egcekeni noma endaweni engakini nawe nabazala wakhe kanye nabazali bakhe, ongabona nabo usuku ngalunye. Ungazami ukuxazulula konke ingane, ngokuphambene, kancane kancane abazali kufanele banciphise ithonya labo kuzo zonke izigaba zokuphila. Leli qhinga lemfundo lizovumela ingane ukuba ikhule ibe yedwa futhi inesibopho.
Enye yezinkinga ezinzima kakhulu futhi ezibucayi - kungenzeka yini ukukhulisa ingane ejabule emndenini ngaphandle kobaba? Esikhathini sethu, abesifazane abaningi bahlangabezana nazo zonke izinjabulo zobumama ngaphandle komyeni, futhi ngezinye izikhathi bonke bodwa. Indlela yokukhulisa ingane uma kungekho ubaba empilweni yakhe? Into ebaluleke kakhulu kumama kuleso simo ukuhlukumeza ngokwabo izicucu ezihambisana nesimo somndeni wakhe. Awukwazi ukukhuluma igama elithi "isizungu" nokuhluka kwawo. Kungakhathaliseki ukuthi izimo zikhula kanjani, manje unabantu ababili futhi usuvele ungumndeni: umama nengane. Kuhle kakhulu, uma isihlobo esilisa singasiza ekukhuliseni ingane: umzalwane omdala, umalume noma umkhulu. Kodwa ngisho noma umuntu onjalo engekho endaweni yakho, akufanele uthukuthele. Ukuthuthukiswa okuphelele kwengane, umama kuzodingeka enze imisebenzi yabazali bobulili bobabili. Impendulo engcono kakhulu yombuzo: "Indlela yokukhulisa ingane ngaphandle kobaba futhi uphathe konke ngokwakho?" - ngezikhathi ezithile ucabange ukuthi ubaba ongcono uzokwenzani. Thuthukisa ingane ngokucacile, ungabi nobuvila naye ukudlala imidlalo nokudlala imidlalo yangaphandle. Uma ingane iningi ifuna ukwenza ibhizinisi elithi "owesilisa" -mthengise amathoyizi afanelekile, uhlele umkhankaso womdlalo webhola noma ukudoba. Eqinisweni, ukukhulisa ingane kumama akulula kakhulu. Into ebaluleke kakhulu uthando kanye nesifiso sokunika ingane konke okusemqoka.
Sikhula ingane ephumelelayo!
Wonke umuntu wesithathu lapho esekhulile unenkinga yezizinda ezitholakale ebuntwaneni. Cabanga nje ngalesi sibalo! Kodwa zonke lezi zinkinga zengqondo zivelaphi, uma ekuqaleni bonke abazali bafisa ukuthi izingane zabo zihle kakhulu? Uma ucabanga ngendlela yokufundisa ingane futhi uthuthuke, akubona sonke esicabanga "ngezinto ezincane" njengokuxhumana kwansuku zonke. Zama ukubamba ngekhanda futhi ufunde imithetho ethile elula. Ungalokothi uqhathanise ingane yakho nezinye izingane, ikakhulukazi uma kuqhathaniswa nakho. Ukulinganisa okubalulekile akuyona indawo enkambisweni yokufundisa ekhaya nokuphishekela izinto zokudala. Khumbula indlela owajabula ngayo lapho umntwana efunda ukuhamba. Ungamthukuthelisa noma ukumgxeka ngenxa yokungathathi izinyathelo zokuqala? Kubuye kudingekile ukuba uziphathe ngesikhathi sokuqaphela noma yimuphi omunye umsebenzi. Ingabe umntwana wakho upende ngokungalingani? Mnikeze omunye umbala, futhi qinisekisa ukudumisa ngokungaphelele. Khumbuza ingane njalo ngangokunokwenzeka mayelana nokuthi uyamthanda, kungakhathaliseki ukuthi uphumelela kanjani nokuziphatha kwakhe. Khumbula ukuthi ungakwazi ukubeka phansi ukuzethemba komuntu omncane kuya ku-zero ngaphandle kokuqaphela. Kuzothatha umzamo omkhulu wokuyibuyisela.
I-kindergartens yangasese ye-Tver
"I-Pampers Active Baby-Dry": ukubuyekezwa. (Pampers Active Baby-Emile). Incazelo, amanani
AmamaRashiya anezingane eziningi: isimo kanye nezinzuzo
Umuthi 'Prostatilen "(ikhandlela): incazelo, imiyalelo, ukubuyekezwa
Carl Zeiss, lens: ukubuyekezwa, izincazelo, izinhlobo, umakhi kanye nokubuyekeza
Finland. Ezokuvakasha ukubona
Ababedlala Joker e "Batman"? Hit Ledzher kanye nomsebenzi wakhe best ifilimu